Samachar Batika || News from Nepal » शनिको प्रभाव कुन राशीमा कस्तो जान्नुहोस ?
शनिको प्रभाव कुन राशीमा कस्तो जान्नुहोस ?
न्यायका देवता शनिको हरेक राशीमा अलग अलग प्रभाव रहने गरेको छ । ज्योतिषविद्का अनुसार धनु राशीमा शनि धनका लागी त सिंह राशीमा वृद्धि विकाशमा जिम्मेदार रहन्छ । शनिको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुबै हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा यसले जिन्दगी बनाउने र बिर्गाने सम्मको स्थिति ल्याउँछ । कुन राशीमा शनिको प्रभाव कस्तो हुन्छ त ?
मेष राशीका ब्यक्तिका लागी शनि करियरको स्वामी मानिन्छन् । शनिका कारण करियरको सुखमा बा’धा आउन सक्छ र सकारात्मक लाभ पनि मिल्न सक्छ । फलामे औठी धारण गरेमा शनिको प्रभाव सकारात्मक बन्न सक्छ ।
वृष राशीका ब्यक्तिका लागी शनि भाग्यको स्वामी मानिन्छन् । शनि कारण भाग्यमा हर प्रकारको सुख प्राप्त हुने अन्यथा भाग्यले साथ नदिने पनि हुनसक्छ । शनि प्रसन्न बनाउन शनि मन्त्रको जप गरे लाभकारी हुनेछ ।
मिथुन राशीका ब्यक्तिका लागी शनि जीवन र आयुको सुख नियन्त्रित गर्ने कारक मानिन्छ । शनि राम्रो हुदाँ पनि खासै सुख पाउन नसक्ने मिथुन राशीका ब्यक्तिले शनि बि’ग्रदा त झन् न’कारात्मक अ’सर झेल्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ हरेक शनिवार अन्न दान गर्नु लाभदायी हुन्छ ।
कर्कट राशीका ब्यक्तिका लागी शनि वैवाहिक सुख र सहयोग प्राप्तिको कारक मानिन्छ । शनि राम्रो भएमा वैवाहिक जीवन पनि सुधार हुन्छ । साथै जीवनमा सहयोग गर्ने ब्यक्ति समेत पाइन्छ । अन्यथा शनि स्तोत्र पाठ गरी बि’ग्रेको शनि सुधार्न सकिन्छ ।
सिंह राशीका ब्यक्तिका लागी शनि जागिर र वृद्धि विकास सुख प्रदायक मानिन्छ । अन्यथा व्यक्तिले चाहेर पनि जागिर पाउन सक्दैन । शनि ख’राब भएमा जीवनमा सहयोग प्राप्त हुदैन । तसर्थ जागिर पाउन पिपलको रुख मुनि दियो बाल्नु लाभदायक मानिन्छ ।
कन्या राशीका ब्यक्तिका लागी शनि सन्तान सुख प्रभावित पार्ने कारक मानिन्छ । शनि बिग्रेको स्थितिमा सन्तान सुख प्राप्त हुदैन । सन्तान भएमा पनि समस्या आइरहन्छ । सन्तान सुख प्राप्त गर्न शिवको उपासना लाभकारी हुन्छ ।
तुला राशीका ब्यक्तिका लागी शनिले जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रभावित पार्दछ । कुनै पनि प्रकारको सुख शनि बिना तुलाले प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ शनि ख’राब भएमा जीवन नर्क समान हुन्छ । शनि प्रसन्न पार्न बिहान साँझ शनि मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ ।
वृश्चिक राशीका ब्यक्तिका लागी शनि परिवारबाट (विशेष दाजुभाइ दिदिबहिनी) प्राप्त हुने सुख प्रभावित हुने गर्दछ । अन्यथा शनि गडबड भएमा पारिवारिक सम्बन्धमा पी’डा भोग्नु पर्ने हुन्छ । शनि प्रसन्न पार्न हनुमानजीको उपासना गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
धनु राशीका ब्यक्तिका लागी शनि आर्थिक स्थिति र पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्ध राख्दछ । शनि ग’डबड भएमा आर्थिक बिषयको सुख प्राप्त हुदैन । यस्तो व्यक्तिले निम्न स्तरबाट जीवन शुरुवात गर्नुपर्ने हुनसक्छ । शनिवार दान गरेमा शनि प्रसन्न हुन्छन् ।
मकर राशीका ब्यक्तिका लागी शनि जीवन र निर्णय प्रभावित पार्ने कारक मानिन्छ । व्यक्ति समय र अवसर सही उपयोग गर्न शनि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ शनि राम्रो हुन आवश्यक छ अन्यथा जीवन सं‘घर्षमा बित्नेछ । शनि प्रसन्न पार्न हनुमानजीको उपासना गर्नुपर्छ ।
कुम्भ राशीका ब्यक्तिका लागी शनि व्यक्तित्व र अध्यात्म केन्द्रित हुन्छ । शनिका कारण व्यक्तित्व र आध्यात्मिक सुख पाउन सकिन्छ । अन्यथा व्यक्ति कुमार्ग र नशाको शिकार हुने सम्भावना रहन्छ । नियमित भगवानको ध्यान र पूजा उपासना गरे शनिबाट लाभ प्राप्त हुन्छ ।
मीन राशीका ब्यक्तिका लागी शनि नियमित रूपमा धन बर्षाउने कारक मानिन्छ । साथै वैवाहिक सुख नियन्त्रित गर्न शनिको प्रभाव नै कारक हुन्छ । व्यक्तिलाई धनको सुख नहुनुमा पनि शनि नै दोषि हुन्छ । तसर्थ शनि प्रसन्न पार्न पिपलको रुख मुनि दीपदान गर्नुपर्दछ ।
न्यायका देवता शनिको हरेक राशीमा अलग अलग प्रभाव रहने गरेको छ । ज्योतिषविद्का अनुसार धनु राशीमा शनि धनका लागी त सिंह राशीमा वृद्धि विकाशमा जिम्मेदार रहन्छ । शनिको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुबै हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा यसले जिन्दगी बनाउने र बिर्गाने सम्मको स्थिति ल्याउँछ । कुन राशीमा शनिको प्रभाव कस्तो हुन्छ जुन हामीले माथी जानकारी दिईसकेका छौ
प्रकाशित मिति १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०२:०१